Umslọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa n'ụwa | Akụkọ Njem
Mostlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa n'ụwa
Maria | | Ecotourism, njem
Oké osimiri jidere akụ dị egwu echekwara maka ndị na-anwa anwa ịbanye n'ime omimi ya iji chọpụta ha. N’ebe ahụ ọ bụghị nanị na ọ ga-ekwe omume ịchọta oke mmiri coral dị egwu, ihe ndị e kere eke na ihe ndị fọdụrụnụ nke ụgbọ mmiri dara, kamakwa ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na-atọ ụtọ nke mmadụ mepụtara bụ ihe ịtụnanya maka anya ndị dịgasị iche iche. Get gaghị efu mgbe ahụ ụzọ nke ụlọ ebe ngosi ihe mgbe ochie kacha ewu ewu n'ụwa.
3 ỌR IS GRANADA
Ala Ijipt nile nke idei mmiri na ala ọma jijiji kpara mkpirisi oge ụfọdụ, ọkachasị na mpaghara Delta, dị n'okpuru mmiri ya bụ otu n'ime ụlọ akụ kachasị mma nke ndị ọkà mmụta ihe ochie maara: obodo dara ada na Cleopatra.
N'ịbụ nke dị n'ụsọ mmiri Abukir Bay na Alexandria, ọtụtụ ala ọma jijiji na ebili mmiri dị ukwuu sitere na ịdị adị nke mmiri si na Cairo ruo Sicily loro ya n'etiti afọ 320 na 1303 nke oge anyị.
Ọ bụghị ebe ọ bụla na-amụ ihe mgbe ochie. Alexandria bụ otu n’ime nnukwu obodo ochie ahụ, ọ bụkwa Alexander Onye Ukwu hiwere ya n’afọ 332 tupu a mụọ Kraịst.Rụ ụzọ e si agagharị n’obodo mejupụtara nnukwu ihe ịtụnanya abụọ nke ụwa oge ochie: Ọbá akwụkwọ na Lighthouse nke Alexandria.
Ugbu a, mgbe ịrahụ ụra karịa ihe karịrị narị afọ iri na isii, obodo ahụ mebiri emebi, nke dị mita ole na ole site na ọdụ ụgbọ mmiri Alexandria ọzọ. Ìgwè nke ndị ọkà mmụta ihe ochie na-agbapụ ụzọ ndị owu na-ama ya iji weghachite akụ ndị dị ka n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ kemgbe ala ọma jijiji ahụ mere ka ụsọ oké osimiri ahụ dị n'akụkụ.
Site na ego ndị a nke ọwụwa anyanwụ Mediterenian akụ nke sphinxes, obelisks, ihe akpụrụ akpụ na ogidi apụtawo. Otú ọ dị, Palacelọ Cleopatra bụ ọla dị na okpueze. Ogige nke e liri n'akụkụ mmiri nke bụ otu n'ime ntọala kacha mkpa n'oge Fero. Iji gbochie nchọpụta a ịdaba na nchefu, a na-atụle ohere ịwụnye usoro nmikpu nke na-enye ndị ọbịa ohere ibuga na nku nku nke obí eze ahụ ma gafere n'okporo ụzọ fiberglass iji mee njem nlegharị anya nke ụlọ nke eze nwanyị a ma ama.
Nke nta nke nta, obodo ahụ mikpuru emikpu n’elu mmiri ebube ya na-abịakwakwa apụta. Ihe niile na-egosi na ụlọ eze Cleopatra ga-abụ ọhụụ ọhụụ njem Egypt na pyramid ndị ama ama.
Na njedebe nke ọzọ nke ụwa dị contemlọ ihe ngosi nka nke mmiri n'okpuru osimiri MUSA (Museumlọ ihe ngosi nka nke Art) na mmiri gbara Cancun, Isla Mujeres na Punta Nizuc gburugburu. A mụrụ ya na 2009 site n'aka Jaime González Cano (Director nke National Marine Park) Roberto Díaz Abraham (Onye isi oche nke Asociados Náuticos de Cancún) na Jason deCaires Taylor, onye Britain na-ese ihe. Ugbu a ebe a bụ otu n'ime ebe kachasị mma mmiri n'okpuru ụwa, nwere ihe karịrị 500 ihe osise ebighi ebi.
Underlọ ihe ngosi nka nke a n'okpuru mmiri Ebumnuche iji gosipụta mmekọrịta dị n'etiti nka na sayensị nke nchekwa gburugburu ebe obibi nakwa ịkwado ịchị achị nke mmiri iji weghachite akuku mmiri.
E kewara ihe ngosi ahụ na veranda abụọ a na-akpọ Salón Manchones na Salón Nizuc. Nke mbụ bụ mita asatọ dị omimi, nke kwesịrị ekwesị maka ndị na-egwu mmiri na ndị na-egwu mmiri na nke abụọ dị mita anọ, na-adabara naanị nsị.
ỌR IS GRANADA
Onye na-ese ihe bụ Jason deCaires Taylor abụghị onye mbido ụdị ọrụ a kemgbe ọtụtụ afọ tupu o sonye na okike nke Akpa Osimiri Osimiri Osimiri Mmiri dị n'àgwàetiti Granada. N'ebe a, anyị hụrụ ọrụ 'Viscitude' (nke na-anọchite anya otu ụmụaka nke agbụrụ dị iche iche na-ejide aka ma na-akpụ gburugburu), 'Un-Still Life II', 'Inverted Solitude' na 'Alluvia', ihe mejupụtara nwanyị abụọ ọnụ ọgụgụ ndị ghọworo nnụnnụ mmiri nke Osimiri Canterbury, na United Kingdom.
Agwaetiti nke Lanzarote ga-anabata ụlọ ngosi ihe mgbe ochie mbụ na Europenke onye Britain bụ eco-sculptor Jason deCaires Taylor. Museo Atlántico Lanzarote ga-adi na udida odida anyanwu nke agwaetiti ahu, n’ebe di nso na Las Coloradas n’ime obodo nke Yaiza, nke gha achoputa onodu kachasi nma maka ntinye ya dika esi zoo ya site na nnukwu mmiri mmiri nke metutara n ’ebe ugwu ugwu. nke Lanzarote.
Ọzọkwa, 2% nke ego a na-enweta site na ebe ngosi ihe mgbe ochie a n'okpuru mmiri ga-aga nyocha na nkesa nke ubara nke umu na oke mmiri nke Lanzarote.
A maara ụsọ oké osimiri dị n'akụkụ ugwu nke Oké Osimiri Mediterenian maka ọmarịcha osimiri ndị na-esite n'Italytali ruo France ma ole na ole maara na n'etiti mmiri Camogli na Portofino na-ezobe ihe a na-akpọ Kraist nke abis, ọla nchara akpụrụ akpụ nke Jizọs Kraịst ji nye Dario Gonzatti nsọpụrụ, onye ama ama onye Italiantali nke nwụrụ na 1950 mgbe ọ na-egwu mmiri.
Onye na-ese ihe ahụ bụ Guido Galletti chọrọ ịkwanyere ebe nchekwa ya ugwu jiri ihe oyiyi a na-adọrọ adọrọ nke 2 mita nke ọla kọpa na aka ya na-eduzi n'elu oké osimiri iji kpọọ ndị dị iche iche ka ha kpee ekpere na udo. Christ nke Abis gọziri agọzi ya na Pope John Paul II na 2000 o we buru akara ngosi okpukpe nke ndi oku azu, ndi otutu na ndi njem nleta, ndi n’abia ebe a ikpe ekpere. N’ezie, n’abalị iri na ise nke ọnwa Ọgọstụ, a na-ahazi “usoro mmiri n'okpuru mmiri” maka akpụrụ akpụ maka ebumnuche a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ecotourism » Mostlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa n'ụwa
Tokyo, obodo nke nnukwu ihe oyiyi
Otu esi aga Boracay? Airway, seaway & landway